जिवनदर्शन सम्बन्धि प्रेरक प्रसंग - सहनशीलताको मूल्य - Jagaran Post
जागरणपोस्ट २१ आश्विन २०७७, बुधबार ०७:४५ कला साहित्य
एक मन्दिरमा स्थापित प्रस्तर मूर्तिमा चढाइएको एक फूलले आक्रोशित हुँदै पुजारीसित भन्यो– पुजारी महोदय, तपाईं जहिल्यै यस प्रस्तर मूर्तिमा मलाई चढाएर यसको पूजा गर्नुहुन्छ । यस्तो पारा मलाई कत्ति पनि मन पर्दैन । पूजा नै गर्ने हो भने त मेरो पो हुनुपर्ने हो त ! किनकि, म कोमल, सुन्दर र सुवासित छु । तपाईं जसको पूजा गरिरहनुभएको छ, त्यो त मात्र एउटा पत्थर हो, पत्थर !
फूलको आक्रोशयुक्त गुनासो सुनिसकेपछि पुजारीले मन्द मुस्कानसाथ भने– हे सुन्दर फूल ! हो, तिमीले भनेजस्तै तिमी सुन्दर छौ । कोमल छौ । सुवासित छौ । तर, तिमीलाई ईश्वरले नै यस्तो बनाएका हुन् । यी सब गुण तिमीले सहजतासाथ प्राप्त गरेका हौ । यसका लागि तिमीले कुनै श्रम गर्नुपरेन । कठोर प्रहार सहनुपरेन । किनकि, देवत्व प्राप्त गर्न निकै कठिन छ । यो देव प्रतिमा निकै कठिनतापूर्वक निर्माण गरिएको हुन्छ ।
एक कठोर पत्थरले देव प्रतिमा बन्न हजारौँ प्रहार सहनुपर्छ । चोट लाग्दैमा कमजोर भई फुटेको भए यो कहिल्यै देव प्रतिमा बनेर यसरी मन्दिरको शोभा बन्न सक्ने थिएन । कुनै कडा पत्थर मूर्तिकारको घन र छिनोको प्रहार सहँदासहँदा जब सुन्दर प्रतिमामा परिणत हुन्छ, तब मात्र उसले मन्दिरमा प्रवेश पाउँछ । मानिसहरू उसको पूजा, अर्चना गर्छन् । पत्थरको यही सहनशीलताले नै उसलाई देव प्रतिमाका रूपमा पूजनीय तथा वन्दनीय बनाएको हुन्छ । पुजारीको कुरा सुनेपछि फूल मुसुक्क मुस्कुरायो । कठिन परीक्षा सफलतापूर्वक पार गर्न सक्नेले मात्र देवत्व प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ भन्ने उसले बुझ्यो।